Soomaali ku dhaqan Masar oo sheegay iney la’yihiin baasaboorka cusub ee Soomaaliga oo ay dalbadeen
Soomali badan oo ku nool dalka Masar ayaa dalbaday Baasaboorka Soomaaliga ayaan muddo 3 bil helin wax jawaab ah iyadoo lacagtii loogu sameyn lahaa Basaboorka oo si shaqsi loo isticmaalay.
Waxaa soo baxaya qeyla dhaan xoogan oo sameynayaan Soomaalida ku nool dalka Masar qaarkood kuwaasoo dalbaday Baasaboorka Soomaaliga iyagoo sugayey muddo 3 bil ah waxaana jirta qaarkood inay ku qaadan lahaayeen sharciyo dalal reer galbeed ah oo la siiyey.
Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin inay deg deg u helaan Basabooradooda maadaama ay sheegeen in qofkiiba laga qaaday $170 halka Basbaoorka Soomaaliga lagu sameeyo gudaha Soomaaliya wax ka yar $100.
Mid ka mid ah shaqaalaha Waaxda socdaalka oo aan la xariirnay ayaa sheegay inaysan jirin wax hor istagaayo in baasabooradaas deg deg loo sameeyo laakiin Safaarada Soomaalida dalka Masar aysan soo shubin lacagtii loogu sameyn lahaa Baasaboorka
Mar aan la xariirnay Cali Bashiir oo ah masuul ka tirsan Safaarada Soomaalida ayaa sheegay in dadkan Baasabooradooda ay qaadan doonaan dhawaan waxa shaqada habsaamiyana ay tahay culeys uu sheegay inuu ka jiro Somalia gaar ahaan makiinadaha lagu sameeyo baasaboorada waxuuna inoo sheegay in qofka ugu badan ee ay ka hayaan dalabka Baasaboorada ay sugaayeen wax ka yar Bil isagoo beeniyey inay sugaayeen 3 bilood.
Arintan ayaa ku soo aadeysa xili dhowaan taliyaha hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Jen. Gaafow oo dayniile.com u sheegay in la fududeeyey qaadashada baasaboorka Soomaaliga ayna la yihiin dad ay siiyaan ka dib markii sida uu sheegay au heleen qadka Internetka ee Fiper Obtic oo ah mid xawaare badan, wuxuuna xusay internet xumo awgeed ay daahin jirtay baasaboorka hase ahaatee taas hadda laga gudbay.
Maalmahan waxaa jira khilaaf xoogan oo u dhaxeeyo Safaarada Soomalida ee dalka Masar iyo dowlada Soomaaliya iyadoo mar qadka taleefanka uu kula soo xariiray wasiirka koowaad ee Soomaaliya mudane Cabdi wali Safiirka Sooomaliya kuna amray inuu soo xaroodo taasoo uu diiday Safiirka iyadoo dhawaan dowlada Soomaaliya ay keeni doonto safiir cusub.